Vaovao - COVID-19 manasongadina ny lanjan'ny Video Laryngoscopy
COVID-19 manasongadina ny lanjan'ny horonantsary video
Ao amin'ny sampana vonjy taitra sy tobim-pitsaboana maivana manerana ny firenena COVID-19 dia nanova ny fomba fiasan'ny hopitaly. Miaraka amin'ny filàna bebe kokoa hanohanana ireo marary amin'ny fahasahiranana amin'ny taovam-pisefoana, mifantoka amin'ny laryngoscopy (VL) horonantsary vaovao ho an'ireo marary mitsofoka napetraka ao anaty rivotra.
Nahazo fanekena mitombo hatrany ny VL satria ny fanamafisana ny sary dia mahatonga azy io ho intubation kokoa hahomby amin'ny andrana voalohany, hahatonga ny fizotrany ho azo antoka kokoa ho an'ny dokotera sy ny marary raha ampitahaina amin'ny laryngoscopy mivantana nentim-paharazana (DL). Ho fanampin'izany, VL dia mampihena ny mety hiparitahan'ny viriosy mahery vaika.
"Ny fisian'ny laryngoscope horonan-tsary isaky ny fidirana an-tsokosoko dia mampihena ny lesoka sy ny fahasahiranana tsy ampoizina, manatsara ny fanehoan-kevitra, ny fianarana ary ny fampianarana", hoy i Marco Zaccagnini, Registrants Respiratory Therapists / Certified Clinical Anesthesia Assistant. "Mizara ny fampidirana am-panafana amin'ny ekipa mpitsabo izy ary manome tontolo azo antoka ho an'ny mpandraharaha sy ny marary."
Ny fidiran'ny endotracheal dia ny fampidirana fantsona endotracheal plastika amin'ny vava na orona, amin'ny alàlan'ny larynx (izay misy ny tadim-peo), ary farany amin'ny trachea (tsofin'ny rivotra). Ny fantsom-pandrefesana dia tarihina amin'ny toerana misy fitaovana fantatra amin'ny anarana hoe laryngoscope, alohan'ny hametahana azy amin'ny rivotra.
Ao anaty fidiran-drivotra DL mahazatra, ny dokotera dia afaka mahita ny tendron'ny laryngoscope rehefa miditra ao am-bava, fa avy eo dia mila miankina amin'ny "fahatsapana" sy ny traikefa hahazoana antoka fa misoroka ny esophagus izy ary napetraka tsara. Ny laryngoscopy mivantana dia mety ho sarotra amin'ny marary sasany. Ny fahazoana ny fomba fijerin'ny larynx dia lakilen'ity teknika ity ary mety hisy fiantraikany amin'ny anton-javatra toy ny firafitra sy ny fivezivezen'ny vozona sy ny valanoranony, ary koa ny anatomin'ny làlan-drivotra ambony.
Ny fidirana an-tsokosoko dia fomba fanao mahazatra, indrindra mandritra ny valan'aretina COVID-19, saingy tsy misy atahorana izany. Indraindray dia mety hisy fahasimbana amin'ny nify, vava na trachea, ary ny laryngoscope dia azo ampidirina tsy nahy ao amin'ny esophagus. Indraindray ny andrana voalohany amin'ny laryngoscopy dia tsy nahomby, mitaky fanandramana manaraka. Ny risika amin'ny marary dia mitombo amin'ny isan'ny fanandramana. Amin'ny tranga COVID-19, ireo mpiasan'ny fahasalamana manao laryngoscopy dia mety ahiana tratran'ny virus.
Sarotra ny hifehezana ny DL, saingy miaraka amin'ny traikefa, anesthesiologists sy therapists respiratory dia nanjary nahay io teknika io ary matetika no nahita fahombiazana tamin'ny andrana voalohany. Nisy ny fanadihadiana[i]na izany aza, ny mpianatra mpitsabo sy ny mponin'ny anesthesia vao vao tena nampidina ny taham-pahombiazana voalohany noho ny mpitsabo anestezista efa za-draharaha.
Ny laryngoscopy amin'ny video kosa dia mora ianarana kokoa satria manome fanamafisana an-tsary ny fivoaran'ny fantsona fisefoana mankany amin'ny trachea. Manatsara ny mety hisian'ny fampidiran-dresaka amin'ny andrana voalohany na dia tsy ampy traikefa aza ny mpitsabo, na raha toa ka manasarotra ny fomba ny fitsaboana. Miaraka amin'ny VL, fakan-tsary amin'ny faran'ny laryngoscope dia manome fijerena tsara kokoa ny làlan-drivotra ambony, ao anatin'izany ny tadim-peo, mampiseho sary an-tsary amin'ny fotoana tena izy eo amin'ny efijery miraikitra amin'ny tanan'ny laryngoscope.
Ny tahan'ny fahombiazana avo lenta kokoa ho an'ny VL dia voamarina tamin'ny fandalinana tamin'ny taona 2019 notarihin'i Dr. Ruediger Noppens, profesora mpiara-miasa amin'ny anestezia ao amin'ny Western University any London, Ontario. Ity fitsapana iraisam-pirenena ity dia nahitana marary maherin'ny 2.000 ary nampitaha ny taham-pahombiazan'ny fidirana voalohany amin'ny alàlan'ny laryngoscope mivantana mivantana sy ny laryngoscope video McGrath MAC, nataon'ny Medtronic.
Ny fandinihana dia nahitana fa ny tahan'ny fahombiazan'ny VL dia 94 isan-jato voalohany, raha oharina amin'ny 82 isan-jato ho an'ny DL, ary koa niteraka tsy faharatran'ny marary. Araka ny voalazan'ny Dr. Noppens, ity fandalinana ity no tena porofo voalohany nanohana ny fampiasana ny VL ho an'ny fampidiran-dra matetika. Ny mpikaroka dia nanatsoaka hevitra fa ny tombony tokana amin'ny DL dia ny fandaniana, na dia ny fandaniam-bola avo lenta voalohany amin'ny fitaovana video aza dia mety mihoatra ny tahiry amin'ny ora ara-potoana sy ny fahasarotana ara-pitsaboana.
Vaovao tsara ho an'ny dokotera vonjy maika sy ICU, izay mazàna manao intubations mahazatra mavesatra kokoa noho ny anesthesiologists. VL koa dia azo antoka kokoa ho an'ireo dokotera mifandraika amin'ny COVID-19 satria tsy mila manakaiky ny tarehin'ny marary toy ny ataony amin'ny DL izy ireo. Azo antoka kokoa ho an'ny marary koa izy io, satria vitsy ny ratra vokatr'izany.
Rehefa mihomehy ny hopitaly hitsaboana ireo marary voan'ny COVID-19 mafy, fiarahamonina matihanina[ii] any amin'ny firenena maro dia nanomboka nanolotra ny fampiasana ny VL hanamora ny fielezan'ny virus. Ireo tolo-kevitra ireo dia miorina amin'ny porofon'ny fahombiazan'ny fanandramana fanandramana voalohany ary ny fitomboan'ny elanelana misy eo amin'ny mpamatsy sy ny marary mandritra ny fomba.
Na dia miha mazava aza ny tombony azo avy amin'ny VL, dia mijanona ho fari-pitsaboana any DL ihany ny DL, raha matetika kosa ny VL dia natokana ho an'ny fitsabahana mafy. Ny ho avin'ny VL amin'izao fotoana izao no lohahevitry ny adihevitra ao amin'ny vondrom-piarahamonina fanatoranana, miaraka amin'ny maro ny mino fa ny tena fanontaniana dia tsy ny hoe hanolo ny DL ho fenitry ny fikolokoloana ve, fa rahoviana.
Fotoana fandefasana: 25-07-21